Football Khabar » युरो कप विशेष
युरो कप विशेष
युरो कप छनौट : एकै खेलमा १० गोल !
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०३:४६
काठमाडौं, मंसिर ३ अर्को वर्ष हुने युरो कपअन्तर्गत आफ्नो अन्तिम छनौट खेलमा इटालीले फराकिलो जित निकालेको छ । नेपाली समयअनुसार मंगलबार बिहान भएको खेलमा इटालीले अर्मानियालाई ९–१ ले स्तब्ध बनायो । दुई पक्षबाट गरी एकै खेलमा १० गोल हुँदा घरेलु टोली इटालीले ९ गोलको वर्षा गरायो । आफूले १ गोल खायो । इटालीका लागि.....
काठमाडौं, मंसिर २ कप्तान तथा स्टार फरवार्ड ह्यारी केनले लगातार गोल गरेपछि युरो कप छनौटमा इंग्ल्यान्डले अन्तिम खेलमा पनि जित निकालेको छ । गत राति भएको खेलमा इंग्लिस टिमले कोसोभोलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–४ ले निराश बनायो । आफ्नो घरमा कोसोभोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि खराब नतिजा भोग्न बाध्य भयो । खेलमा.....
अल्बानियामाथि फ्रासन्को सहज जित : ६ महिनापछि ग्रीजम्यानको गोल
२ मंसिर २०७६, सोमबार ०७:२३
काठमाडौं, मंसिर २ स्टार फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानले राष्ट्रिय टोलीका लागि ६ महिनापछि गोल गर्दा फ्रान्सले युरो कप छनौटमा अर्को जित निकालेको छ । छनौटको अन्तिम खेल अल्बानियाको घरमा खेल्नेक्रममा फ्रान्सले ०–२ को जित निकाल्यो । फ्रान्सले गरेका २ वटै गोलमा ग्रीजम्यानको सहभागिता रह्यो । उनले पहलो गोलमा.....
पोर्चुगल युरो कपमा छनौट : रोनाल्डोको खातामा ९९ गोल !
१ मंसिर २०७६, आईतवार २१:५३
काठमाडौं, मंसिर १ कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्तिम समयमा गोल गर्दै आफ्नो खातामा ९९ अन्तर्राष्ट्रिय गोल बनाउँदा साबिक च्याम्पियन पोर्चुगल अर्को वर्ष हुने युरो कपका लागि छनौट भएको छ । आज भएको अन्तिम छनौट खेलमा पोर्चुगलले लक्जेमबर्गलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–२ ले स्तब्ध बनाउँदै प्रतियोगितामा औपचारिक.....
१ मंसिर २०७६, आईतवार १७:५९
काठमाडौं, मंसिर १ अर्को वर्ष हुने युरो कप फुटबलका लागि जारी छनौट खेलमा सर्वाधिक गोलकर्तामा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । छनौट चरणमा हरेक देशले आफ्नो अन्तिम खेल खेल्नु अघिसम्म तीन खेलाडीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । ताजा अवस्थामा इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केन ११ गोलसहित शीर्ष स्थानमा छन् ।.....
युरो कप छनौटमा आज अन्तिम राउन्डका सात खेल हुँदै : को–को भिड्दैछन् ?
१ मंसिर २०७६, आईतवार १२:०८
काठमाडौं, मंसिर १ अर्को वर्ष आयोजना हुने युरो कप फुटबलका लागि जारी छनौट खेलमा आजबाट अन्तिम राउन्डका खेलहरू हुँदैछन् । गत रातिका खेलपछि आजदेखि अन्तिम राउन्डका खेल हुन लागेका हुन् । आज एकैदिन कूल ७ खेल हुँदैछन् । आज हुने खेलहरूमा पोर्चुगल, युक्रेन, इंग्ल्यान्ड, आइसल्यान्ड, फ्रान्सका खेल रोमाञ्चक हुनेछन्.....
आज लक्जेमबर्गसँग निर्णायक भिडन्त : रोनाल्डोले पोर्चुगललाई पुर्‍याउलान् युरो कपमा ?
१ मंसिर २०७६, आईतवार ११:३१
काठमाडौं, मंसिर १ सन् २०१६ को युरो च्याम्पियन पोर्चुगल आज छनौट चरणको अन्तिम खेल खेल्दैछ । आज अन्तिम खेल अवे मैदानमा लक्जेमबर्गविरुद्ध खेल्दा पोर्चुगल स्पष्ट जित निकालेर अर्को वर्ष हुने प्रतियोगिताका लागि छनौट हुन चाहन्छ । खेल राति ७ः४५ बजेबाट लक्जेमबर्गको घरमा सुरु हुनेछ । हाल पोर्चुगल समूह ‘बी’ मा.....
युरो कप छनौटमा वेल्सको महत्त्वपूर्ण जित : छनौट हुन अन्तिम खेल जित्नैपर्ने
१ मंसिर २०७६, आईतवार ०९:३४
काठमाडौं, मंसिर १ स्टार खेलाडी ग्यारेथ बेलको टोली वेल्सले युरो कप छनौट खेलमा महत्त्वपूर्ण जित निकालेको छ । गत राति भएको खेलमा वेल्सले अजरबैजानलाई उसकै घरेलु मैदानमा ०–२ ले हरायो । अवे मैदानमा वेल्सलाई जिताउन खेलको १०औं मिनेटमा किफर मोरेले पहिलो गोल गरेका थिए । उनले ह्यारी विल्सनको पासमा निकै सुन्दर फिनिसिङमा.....
१ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:१३
काठमाडौं, मंसिर १ फुटबलको महाशक्ति राष्ट्र जर्मनी अर्को वर्ष हुने युरो कपका लागि छनौट भएको छ । गत राति आफ्नो घरमा पाहुना टोली बेलारुसमाथि ४–० को शानदार जित निकाल्दै जर्मनीले युरो कपको टिकट काटेको हो । आफ्नो घरमा जर्मनीलाई जिताउन ३ जना खेलाडीले गोल गरे । जसमा टोनी क्रुसले २ गोल गरे भने १ गोलका लागि असिसस्टसमेत.....
नेदरल्यान्ड्सको कमब्याक : आठ वर्षपछि युरोपियन प्रतियोगितामा छनौट
१ मंसिर २०७६, आईतवार ०८:११
काठमाठौं, मंसिर १ नेदरल्यान्ड्स करिब ८ वर्षपछि युरोपियन प्रतियोगितामा छानिन सफल भएको छ । यसअघि सन् २०१६ को युरो कप र २०१८ को विश्वकपमा छानिनै नसकेको डच टोली ८ वर्षपछि ठूला प्रतियोगिता खेल्न छानिएको हो । अर्को वर्ष हुने युरो कपका लागि छारी छनौट खेलअन्तर्गत डच टिमले गत राति भएको सातौं खेलमा नर्दन आयारल्यान्डसँग.....